အမျိုးသားနိုင်ငံရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ ဒီမိုကရေစီပညာရေး၊ ကျောင်းသားထုအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး
Hi Min, Your Facebook password was changed on Thursday, February 25, 2016 at 11:45am (UTC+06:30). Device: Galaxy A5 IP address: 111.84.195.254 Carrier: Telenor If you did this, you can safely disregard this email. If you didn't do this, please secure your account . Thanks, The Facebook Security Team
Your Facebook password was changed on Thursday, February 25, 2016 at 11:45am (UTC+06:30).
Device: Galaxy A5
IP address: 111.84.195.254
This message was sent to freebumar2010.mtt2007@blogger.com. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Posted by ရ.က.သ at 11:45 AM No comments:
Hi Min, Somebody recently asked to reset your Facebook password. Click here to change your password. Alternatively, you can enter the following password reset code: 984203 Didn't request this change? If you didn't requestanew password, let us know immediately .
This message was sent to freebumar2010.mtt2007@blogger.com at your request.
Posted by ရ.က.သ at 7:16 PM No comments:
၂၀၁၂ ကိုတော့ရောက်လာပြီ။ နှစ်သစ်မှာ ရဲဘော်အပေါင်းရွှင်လန်းချမ်းမြေ့စေဖို့
ကျောင်းသားဆိုတာ အတန်းစာကျက်ပြီး စာမေးပွဲအောင်ရုံမျှ
ဆိုတဲ့အယူအဆဟာ တကယ့်ကို ခေတ်အောက်ကျတဲ့
ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းဟာ ကျောင်းသားထုရဲ့ သမိုင်းဖြစ်တယ်။
နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲ အဆက်ဆက်မှာလည်း ကျောင်းသားထုရဲ့ ပါဝင်လှုပ်ရှားမှုဟာ သမိုင်းတွင်ခဲ့တယ်။
ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲ အဆက်ဆက် မှာလည်း ကျောင်းသားထုရဲ့ ပါဝင်လှုပ်ရှားမှုဟာ သမိုင်းတင်ခဲ့တယ်။
ကျောင်းသားသမဂ္ဂ တရားဝင် ဖွဲ့စည်းရပ်တည်နိုင်ဖို့
ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ မူ ၅ ချက် ဖြစ်တဲ့
နဲ့အညီ နောက်မဆုတ်တမ်း ရှေ့ ကို ချီတက်ကြမယ်။
သူတို့တွေရဲ့ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဒို့တတွေ ကျိုးပမ်းကြရလိမ့်မယ်။